Otu esi etinye Discord na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
September 16, 2021 June 12, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Wụnye Discord Snap
Nhọrọ 2. Wụnye ngwugwu Discord .deb
Otu esi ewebata onye ahịa Discord
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye onye ahịa Discord na Ubuntu 20.04 na-eji ụzọ abụọ dị iche iche.
Ụzọ mbụ iji wụnye Discord bụ iji Snap nke etinyere na njikwa nkesa Linux. Nke a na-abịabu etinyere na sistemụ Ubuntu na ndabara.
Wụnye Discord jiri ọnyà site na itinye iwu a.
Iji wepụ Discord n'ọdịnihu na Snap, jiri iwu a:
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye Discord na ngwugwu Debian site na iji wget iwu:
Ozugbo ị mechara nbudata, gaba n'ihu ịwụnye ya .deb ngwugwu.
Na-esote, chọpụta na nrụnye ahụ gara nke ọma site na-agba ọsọ iwu amụma apt-cache:
Site na nrụnye zuru oke site na usoro nrụnye ọ bụla, ị nwere ike ịgba Discord n'ụzọ dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ esemokwu & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
Ugbu a mepee Discord, ị ga-abịa na ibe nbanye, ma mepụta akaụntụ ma ọ bụ jiri akaụntụ dị adị, nke ahụ bụ ya; ị tinyela Discord nke ọma na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Nkuzi a akọwapụtala otu esi etinye Discord na ngwungwu snap na Debian. Agbanyeghị, ngwungwu Snap adịchaghị ewu ewu, yabụ ngwugwu .deb bụ ụzọ aga maka ndị ọrụ ka elu. Discord bụ na ọ ga-abụ ọnụ ọgụgụ 1 ikpo okwu egwuregwu maka obodo dị n'ịntanetị maka afọ ndị na-abịa. Agbanyeghị, TeamSpeak kwadoro onwe ya na-alọghachi. Ọdịnihu ga-ekpebi ma Discord nwere ike idobe ọchịchị ya, nyere ihe gbasara nzuzo ụbọchị ndị a.
Otu esi etinye VLC Media Player na Ubuntu 20.04